समाचार र सोसायटी, प्रकृति
जलाशय प्राकृतिक प्राकृतिक परिदृश्य को एक अभिन्न भाग हो। पारिस्थितिकी तंत्रका विशेषताहरु र स्थानिक विषगतता को दीर्घकालिक विविधता कृत्रिम जलाशय को मुख्य विशेषताहरु हुन्। पानी को स्तर को विनियमित गर्ने संभावनाको कारण, कामा जलाशय एक विशेष हाइड्रोक्कोलॉजिकल शासनमा चलिरहेको छ। यसले गठन, संकलन, वितरण र पादरीहरूको गुणस्तर घडीको निर्दिष्टता निर्धारण गर्दछ।
बांध निर्माण पछि पूरा भएपछि कामा नदीमा एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशनको निर्माणको परिणामस्वरूप कामा जलाशयहरुको कास्केड बनाइएको छ। बाढीको क्षेत्रमा, त्यहाँ थुप्रै बस्तीहरू थिए, साथसाथै ठूला ठूला औद्योगिक उद्यमहरू चर्मोजस्की धातुकर्म संयंत्र, पोलजनेन्स्क आयरन-कन्फान संयन्त्र र फलाम फाउण्ड्री जस्ता थिए। जलाशय को किनारा मा, पामस्काया GRES को निर्माण भएको थियो।
पानी निकासीको अवशोषण
रूसी अधिकारीहरु राज्य को यूरोपीय भाग को नदिहरु को वार्षिक सुअवसर संग सामना गर्दै छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, आधे खाली जलाशयहरुमा पानी घुमाउन, सुरक्षा ईन्जिनियरिङ् संरचनाहरू नष्ट गरीन्छन्, र जलाशयहरु को वोल्गा-कामा झगडा नगरी गैर-कमाण्डर रियादहरुमा काम गर्दछ। क्षेत्रमा अत्यावश्यक स्रोतहरूको कमी छ। 2008 देखि 2009सम्मको अवधिमा वोल्गाको बासिन्दाको कारण, धेरै दर्जन बस्ती बिना पानी छोडिएको थियो।
अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ
बिरुवाको प्रक्रियालाई नदिएको नदीहरु द्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। यो एक प्रसिद्ध तथ्य हो, तर यस चक्रवातता देशको आर्थिक परिस्थितिमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव छ। 40% जनसंख्या वोल्गा बेसिन मा रहछन। देशको औद्योगिक र कृषि क्षमताको लगभग आधा यस क्षेत्रमा अवस्थित छ।
स्थायी पानी रोटी
वोल्गा-कामा रिजर्वियरको स्थापना पछि, जनसंख्या र बेसिन को प्राकृतिक परिसरहरुमा कुनै असामान्य राय छैन। भोल्गामा कृत्रिम जलाशयहरू सिर्जना गर्ने परिणामहरूको बारेमा नकारात्मक समीक्षाहरूको साथ प्रकाशनहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। स्थिर समुद्रमा पानीको गुण छिटो बिग्रिएको छ। यसले सम्भावित नकारात्मक नतिजाहरूको घटनालाई योगदान गर्दछ र गम्भीर आलोचनाको कारण दिन्छ।
वैज्ञानिकहरूको विचारमा भेदभाव
जलाशयहरूको विरोध र समर्थकहरू यस मुद्दाको एक पक्षीय दृष्टिकोण हुन्। तिनीहरू एकअर्कालाई बुझ्न चाहँदैनन्। र केहि कमजोरीहरू र अरूलाई बढावा गर्न प्रबन्ध गर्दछ - र जलाशयहरू सिर्जना गर्ने गुणहरू। यदि तपाईं मुद्दाको सबै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने, तपाईं निष्कर्षमा पुग्न सक्नुहुन्छ कि विशाल जलाशयहरूको निर्माणले सम्पूर्ण समाजलाई नैतिक, पारिस्थितिकी र आर्थिक क्षतिको अस्वीकार गर्दछ। एक निष्कर्ष यो हो कि एक कोमा रिजर्भिरर बनाउनु हुँदैन।
माछा भएको लाभ
यहाँ फिशिंग भ्याम, पिइक, पेच, रच, पाइक पर्च, आइडिया र भाइमा आयोजित गरिन्छ। जाडोमा समातेर यस तालाबमा विशेष गरी रोचक छ। पर्म र अन्य नजिकैको ठाउँबाट धेरै मछुआरेहरू यहाँ झण्डा लाग्न लाग्छन्। यहाँ यस्तो माछाको पर्याप्त छ, र यो लगभग सधैँ पकडिएको छ।
मार्चमा पाइइक पछाडि फेला पार्न फेब्रुअरी भन्दा धेरै सजिलो छ। जाडोको दोस्रो भागमा, पानीको मासुको निर्मूल उत्पादन गरिन्छ, र कामा जलाशय माछा माछाको लागि सबैभन्दा राम्रो ठाउँ होइन। मार्चमा पिकिक पार्च सक्रिय रूपमा जलाशयसँगै साथमा सुरू हुन्छ।
जाडोमा स्नोमोबाइलको साथ माछा मार्ने जाने यो भन्दा राम्रो छ। कारबाट सबै भन्दा रोचक ठाउँहरू, र खुट्टामा धेरै टाढा जान्न असम्भव छ। स्थानीय anglers को लागि एक स्नोमोबाइल परिवहन को इष्टतम मोड हो। यस्तो गाडीको मद्दतले जलाशयको कुनै पनि भाग जाडोमा उपलब्ध हुनेछ।
कामा जलाशय नदी नदी को प्रवाह मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ। यस बांधले कम्मा, चूसोयाया, सिल्वा, ओबावा, अवा, कोसे नदीको नदीमा 22 मीटर सम्म पानीको स्तरलाई समर्थन गर्दछ। सामान्य परिस्थितिमा जलाशयको मात्रा 12.2 घन किलोमिटर छ, र क्षेत्र 1910 वर्ग किलोमिटर छ। अधिकतम गहिराइ 30 मिटर हुन्छ, र चौडाई 14 किलोमिटर हुन्छ। कामा र कानको संगममा 27 किलोमिटर सम्मको दूरीमा रहेको बैंक बीचको दूरी। यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि काम नदीमा कृत्रिम जलाशय सृष्टिले वातावरणलाई हानिकारक छ भने यदि वैज्ञानिकहरू र स्थानीय आबादीको बीचमा अवस्थित धेरै विचारहरू लिन्छ।
चिनियाँ मिति: बढ्दो र प्रजनन। चीनियाँ मिति (अनबीबी): बिरुवाहरू
पिरान्हा माछा: विवरण र फोटो
ज्याक-मकिंगबर्ड एक उत्सुक र शोर पक्षी हो
नियमन Crossroads: एक चिन्ह, नियमहरूमा गर्दछ। आन्दोलन नियन्त्रण जंक्शन
अन्डा बिछाउने को quails सुरु गर्दा र अन्डा उत्पादन कसरी बढाउने?
लक्षण Pasternatskogo - चासो लागि कारण
संगठित व्यक्ति - के हो? संगठित व्यक्ति: परिभाषा